बिना व्यायाम चाहिए जस्तो बन्छ शरिर - Vishwa News
मेरा केही इष्टमित्रले जीवनभर मोटाउने रहर पाले । केहीले दुब्लाउने । तर सकेनन् । अझ भनौं जानेनन् । मनको एउटा कुनामा त्यो रहरले कुत्कुत्याई रहेपनि ‘हैन / छैन’ भन्न छाडेनन् । यद्यपी ‘जे छु ठीक छु’ भनेकै राम्रो । नसकेपछि चित्त बुझाउनुको बिकल्प नरहेको अवस्थामा यथास्थितिमा नै सन्तुष्ट हुनुपनि सकारात्मक ठान्दछु । मेलै केहीको सन्धर्भ उठाएको हुँ । धेरैजसो ठिकठाक देखिन्छन् । यो आलेखमा ती दबेका रहरलाई जगाउने यत्न गर्नेछु ।
मानव शरिर संसारको सबैभन्दा अनौठो, अलौकिक, अदृष्य, आश्चार्य र अदभुत विज्ञान हो । नङले कतिसम्म बढ्ने ? दाँतले कति ? आँखी भौं र परेलाको बढ्ने सिमा कति ? जति मोटाएपनि नाक, कानले किन आकार बदल्दैन ? कालो कोठी, रातो कोठी, खैरो कोठी किन आउँछ ? यो सबै किन हुन्छ ? अझै बिज्ञानलाई थाहा छैन । ब्रम्हाण्ड भन्दा पनि जटिल छ शरिर विज्ञान । विषयबस्तुमा प्रवेश गरौं । किन मोटाईन्छ ? किन दुब्लाईन्छ ? किन घट्दैन ? किन बढ्दैन ? इत्यादी ।
हाम्रो शरिरका जिवित सेलहरुमा मेटाबोलिजम् भन्ने एक प्रकारको रसायनिक प्रकृया भई नै राखेको हुन्छ । यो प्रकृयाले मानिसलाई जिबित राख्न आवश्यक पर्ने पदार्थ र शक्ती उत्पादन गर्दछ । यसरी उत्पादित शक्तिले अर्को स्तरमा ताप र बल उत्पादन गर्दछ, जसलाई क्याटाबोलिजम भनिन्छ । यसै प्रकृया अन्तर्गत बिग्रिएको टिस्यु मर्मत गर्न र शरिर स्फुर्त राख्न आवश्यक प्रोटिन व्यवस्थापन गर्नको लागि एनाबोलिजम भन्ने कृया हुन्छ । मुख्यत; यो मेटाबोलिजम भन्ने प्रकृयाको गति कसैको छिटो र कसैको ढिलो हुन्छ । मेटाबोलिक स्पिड हाई हुने मान्छेको शरिरले खानाबाट प्राप्त पदार्थलाई चाँडै शक्ति, ताप र प्रोटिन लगायतका तत्वमा परिणत गर्दछ । जस्तै; चराहरु संसारको सबैभन्दा उच्च मेटाबोलिक उत्पादन दर बढी भएको प्राणी हो । चरालाई उच्च गति र उचाईमा उड्नका लागि अत्याधिक शक्ति चाहिन्छ । चरामा तातो रगत हुनु र मोटाबोलिजम् दर बढी हुनुको कारणले मात्र उचाईमा उड्न सम्भव भएको हो । उनीहरु मोटो हुँदैनन् । सामान्यतया मानिसमा मेटाबोलिजम् दर आवश्यकता अनुसार सामान्य नै हुन्छ । तर कसैकसैमा कम र कसैमा बढी हुन्छ । मेटाबोलिजम कम हुने मान्छेको शरिरले साधारण खानाको बोसो पदार्थ पनि संचित गर्न थाल्दछ । सहजै क्यालोरी बर्न गर्न सक्दैन । अर्थात ती मानिसको प्याक्रियाजले हामीले खाएको कार्बोहाइड्रेटलाई टुक्रा पार्दै ग्लुकोज नियन्त्रण गरी आवश्यक इन्सुलिन उत्पादन गर्नु पर्नेमा रगतमा भएको ग्लुकोजको आधारमा इन्सुलिन कम अथवा ढिलो बनाउँदछ । यसरी उत्पादित इन्सुलिनले नै सेलहरुमा बिभिन्न आवश्यक तत्व पठाउने काम गर्दछ । आवश्यक इन्सुलिनको अभावमा मानिसको सेलहरु मर्न थाल्दछ । धेरै सेलहरु भटाभट सिथिल भएर काम गर्न नसक्ने भएपछि मेटाबोलिक प्रकृया बन्द हुन्छ । शरिरले ताप, शक्ति र बल प्राप्त गर्दैन । अनि राम-नाम-सत्य हुन्छ ।
यसर्थ, मोटाउनु र दुब्लाउनु भनेको हामीले खाएको कार्बोहाईड्रेटको मात्रा, प्यांक्रियाजको इन्सुलिन बनाउने कार्य क्षमता र मेटाबोलिजम प्रकृयामा निर्भर रहन्छ ।
त्यसोभए दुब्लाउने कसरी त ?
मोटेहरुको शरिरमा बोसो धेरै हुन्छ । बोसो अनावश्यक तैलिय पदार्थ र संचित कार्वोहाइड्रेटको मात्रा हो । चिकित्सकको भाषामा भन्नु पर्दा ट्राईग्लिसेराईड्स, कोलेस्ट्रोल र तैलीय एसिड नै बोसो हो । मोटेहरुको समस्या भनेको कार्बोहाईड्रेट्सको अव्यवस्थापन हो । कार्ब भन्नाले भात, आलू, पाउरोटी, रोटी, मकै, मैदा पिठो अर्थात अन्नहरु हो । यी अन्नहरु र फ्राईड खाना ५ दिन खान रोक्ने हो भने शरिर संयन्त्रले आफू संचालित हुनका लागि आवश्यक पर्ने कार्बोहाइड्रेट्स अर्थात कार्ब शरिरमा संचित बोसोबाट बाध्य भएर लिन थाल्दछ । छैठौं र सातौं दिनमा बोसो गिलो र पातलो हुन थाल्दछ । तौल घट्न शुरु हुन्छ । एक हप्ता शरिरले थप कार्ब नपाएपछि बोसोमा संचित कार्व गुमाउनु परेको कारण बढी गुमाएको ठाउँमा बुरुरु डाबर निस्कन थाल्दछ । त्यस्तो अवस्थामा अलिकति खाना खाएमा तुरुन्तै डाबर हट्दछ । मसल्स बलियो र कसिलो बनाउन व्यायाम गर्न पनि सकिन्छ तर वजन घटाउन मात्रलाई ब्यायाम आवश्यक पर्दैन ।
त्यसो भए त्यो एक हप्ता के खाने त ? भन्नुहोला । खाना प्रसस्त छ; राँगा, खसी, कुखुराको मासु, माछा, दही, दुध, अण्डा, सागपात, तरकारी, गेडागुडी, फलफुल, इत्यादी जति खाँदा पनि हुन्छ । आठौं दिनदेखि १५ औं दिनसम्म पनि कार्ब रोकेर पहिले जस्तै गर्नुस् । बीचमा डाबर आए अलिकति भात भर्दिनुस्, सफा चट हुन्छ । १६ औंदेखि ३० औं दिनसम्म अलिअलि कार्ब खान शुरु गर्नुस् । शरिर कसिलो पार्न हल्का व्यायाम शुरु गर्नुस् । ३१ औं दिनमा सबै कपडा नयाँ किन्नुपर्ने हुन्छ ।
अब मोटाउने कसरी त ?
त्यसो त मोटाउन आवश्यक नै छैन । तथापी जीवनभर अन्तरमनमा लुकेको रहर पुरा गर्न र श्रीमतीले “हजुर पनि अलिकति मोटाइस्यो न” भनेर करकर गरेको छ भने हल्का मोटाउँदा हुन्छ । तँपाईको माईण्ड र मेटाबोलिजम् स्ट्रेन्थ छिटो चलिराखेको छ । यसर्थ, शरिरलाई बेस्सरी कार्ब र प्रोटिन दिनुस् । माइण्ड र मेटाबोलिजमको गतिलाई आराम दिन ८ घण्टा अनिवार्य सुत्नुस् । छोटोछोटो समयमा केही न केही खाई राख्नुस् । पाचन रसलाई खाली रहन नदिनुस् । कस्ले भन्छ तँपाई मोटाउन सक्नुहुन्न भनेर ? जोरीपारीको मुखेन्जेल एक बर्खा पेट लगाएर देखाईदिनुस् र भन्नुस् “खान्दानी भुँडी हो” । अर्को बर्खापनि निरन्तरता दिनु भयो भने डायबिटिज र हाई ब्लड प्रेसरको दबाई खानुपर्ला ! चाँडै रहर त्यागी हाल्नुस् ।
Yogesh Dangol ‘Aadi’